FAAFIDDA ROSEISE: FAA'IIDOOYINKA IYO DHIBAATADA, SIDA LOO KARIYO IYO SIDA LOO QAATO - CUNNOOYINKA DAAWADA DHAQANKA
Gaaban oo ku saabsan faa'iidooyinka duurjoogta
Buundo ku filan oo dheer oo leh caleemo farabadan, ubaxyo qurux badan, ubaxyo khatar ah iyo miraha khudradda leh ayaa muddo dheer istaagay inay noqdaan duur. Rosehip ma aha oo kaliya qurux badan, laakiin sidoo kale waxaa ku jira nafaqooyin badan, kuwaas oo dad badan oo maanta yaqaan.
Baro sida loo kala soocayo koritaankii koritaanka.
Waxyaabaha Fitamiin ah
Warshadda waxaa ku jira noocyo kala duwan oo waxtar leh oo daaweyn ah (ka dibna, qiyaastooda ayaa la bixiyaa 100 garaam oo beruud):
ascorbic acid - walaxdaas ku jirta miskaha in ka badan 7000 mg 100 garaam;
bioflavonoids - 1400 mg;
Vitamin C - 600-800 mg (laga bilaabo 2500 ilaa 17800 mg noocyada qaar);
carotene - 42 mg;
asiidhyada dabiiciga ah: malic, citric, tartaric, iwm. - ilaa 4% miisaanka.
Marka lagu daro walxaha leh waxyaabo muhiim ah, walxo kale iyo walaxyo ayaa laga helaa geedka, kuwaas oo ka yar, laakiin waxay ku filan yihiin saameyn togan ku leh jirka bini'aadamka. Vitamiinada kala duwan ee kooxaha B, E iyo K, iyo sidoo kale sonkorta, pectins, tannins, iyo macdanta (birta, manganese, potassium iyo cusbada cusbada) waxaa laga helaa eeyga. Seeds waxa ku jira saliidaha lagama maarmaanka ah iyo asiidh dufan oo daciif ah.
Ma taqaanaa? Maadada fitamiin C ee miskaha waa 100 jeer ka sarreeya tufaaxa, 50 jeer ka sarreysa content liin, iyo 10 jeer ka badan currants madow.
Calorie iyo BJU
Heerka korriinshaha yar wuxuu ka dhigaa wax soo saarka cuntada - 100 garaam oo beruud ah oo qallalan ayaa ku jira 110 kilibaaris. In maqnaansho buuxda ee dufanka, 100 garaam oo dhirta ka kooban yahay ilaa 3.4 g oo ah borotiinka iyo 21.5 g of carbohydrates.
Ku saabsan faa'iidooyinka faleebo
Hoos u dhigista Roseise wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo faa'iido leh oo loogu talagalay dadka waaweyn iyo carruurta. Warshadani waa falanqeeyn ka timaadda dhibaatooyin badan oo la xiriira caafimaadka aadanaha.
Rosehip waxay leedahay tiro balaadhan oo ah guryaha daryeelka. Waa kuwan kuwa ugu waaweyn:
kaadida iyo choleretic;
caawinta samaynta unugyada dhiigga cas;
Faleebo ayaa kaa caawin karta xanaaq iyo qulqulo, iyo sidoo kale xanuun xannuun leh. Isticmaalidda afka afkeeda waxay caawin doontaa in la yareeyo calaamadaha stomatitis oo ay ku dhaqaan jeermiska. Sidoo kale, isticmaalka faleebo waxay ku dhiirri gelinaysaa oo siinaysaa awood dheeraad ah nolosha. Kalluunku wuxuu yareeyaa xanuunka markuu qofku qaniinyo cayayaanka, jarista ama gubashada.
Faa'iidooyinka xayawaannada duurjoogta ah ee jidhka ilmaha waa maadada sare ee fiitamiin C.
Vitamin C sidoo kale waa hodan ku ah buckthorn badda, dhir, currant madow, sprouts Brussels, toon digaag ah, oranji, liin, broccoli, iyo dill.
Qiimaha dib-u-soo-kabashada ee faleebo-celinta ee loo yaqaan 'organism' kaas oo ka badbaaday hargab waa dhib badan tahay. Iyada oo la adeegsanayo daraasaddaha kiliiniga waxaa la xaqiijiyay in diyaarinta dhirtaas ay saameyn aad u wanaagsan ku yeelan karto jirka inta lagu jiro xilliga cudurku laftiisa oo aad muhiim u ah marka laga soo kabsado. Waxay sidoo kale ku haboonaanayaan ka hortagga inta ka hartay waqtiga.
Waa muhiim! Kaliya 10 caleemo oo duurjoog ah ayaa awoodi kara inay buuxiyaan baahida nolol maalmeedka ee fitamiin C. Oggolaanshaha faleebadu waxay ka caawisaa dagaalka lagaga soo horjeedo fitamiinada.
Nuujin iyo uur?
Jawaabta su'aashan waa mid toos ah - waad awoodi kartaa. Si kastaba ha noqotee, ha ku lug yeelin faleebo cabbiraad: sida cabitaan kasta, duurjoogta qadar badan ayaa sababi karta saameyn xun, iyo xilliga uurka waxaa si gaar ah u fiirsanaya dhammaan daawooyinka iyo dareeraha la qaato.
Hoos u dhicii oo uur leh muddada uurka iyo naas-nuujintu waa daaweyn wanaagsan oo hargabkan ah, sababtoo ah dhirta ku jirta qadar dhexe ma keento xasaasiyad, iyadoo la siinayo bouquet maaddooyin faa'iido leh oo ay ka kooban tahay, xitaa la tartami karaan foomamka rasmiga ah ee dumarka uurka leh.
Marka lagu daro soo-dhoweynta qabowga, gogol-celinta jimicsiga waxaa loo isticmaali karaa haweenka uurka leh:
xoojinta maraakiibta dhiigga;
hagaajinta suxuunta hormoonnada qanjirada endocrine;
isugeynta fitamiinada A iyo E;
ka saarista sunta sunta dadka ka sameysma;
yareeya saamaynta xasaasiyadeed ee asal ahaan ka soo jeeda.
Waxaan kugula talineynaa inaad barato sidii ay u kori lahayd duurjoogta geedkaaga iyo noocyada ay ku habboon yihiin inay doortaan.
Ma jiraa waxyeelo?
Marka lagu daro saameynta saxda ah ee ku saabsan caafimaadka bini'aadamka, faleebo qumman ayaa sidoo kale dhaawici karta. Markaad qaadato, waxaa lagama maarmaan ah in la qaato nasasho si beerka iyo xubnaha kale ee gudaha ay u nastaan ​​saamaynta ay ku yeelan karto dhismaha fitamiinada. Waxaa ugu wanaagsan in la isku daro infusions of dhirta, daawooyinka: kiiskan, ma noqon doono caajis, iyo jidhku wuxuu awoodi doonaa inuu helo noocyo kala duwan oo maaddooyin waxtar leh iyo raad raaco xubno.
Waa muhiim! Isticmaalka muddada dheer ee faleebo koritaanka wuxuu dhaawici karaa dhalada dhalada, sidaas darteed, waxaa lagu talinayaa in la cabbo iyada oo caws.
Cabsida ugu weyn ee cabitaanka waa kuwan soo socda:
ujeedka jidhka si loo sameeyo xinjiro dhiig iyo horumarinta thrombophlebitis;
xanuunka qanjirada sare;
oogista albaabka gudaha ee wadnaha - endocarditis;
Inkasta oo ay ka mid tahay hypoallergenicity ee midhaha geedka, mararka qaarkood waxay keeni karaan dulqaad.
Dadka diabeteska qabaa ma aha kuwo ka hortagaya cabitaanka laf ahaantiisa, laakiin marka lagu daro sonkorta.
Sida loo sameeyo faleebo
Faa'iidada duurjoogta ayaa aad u sareysa in maaddooyinka lagama maarmaanka u ah hawlaha caadiga ah ee jidhka ay ku jiraan ma aha oo kaliya in ay berry, laakiin sidoo kale qaybaha kale ee warshadda. Ka feker sidii aad si habboon u diyaarin laheyd geedkaan.
Petals ee warshad waa kaydka maaddooyinka waxtar leh ee maqaarka iyo dareeraha kala duwan ee macmacaanka iyo macnaheedu waxaa laga diyaariyey iyaga.
Cuntada caadiga ah
Laba qaado oo tufaax ah ku shub hal galaas oo biyo ah karkar ku habboon, ku dabool maro qaro ah ilaa nus saac. Sumoobka keentay waa la ciribtiray oo ku shubay dhalooyin nadiif ah oo yar. Ka dib marka la qaboojiyo, dareeraha waxaa lagu keydin karaa qaboojiyaha ilaa illaa usbuuc si aad u tirtirto maqaarka. Cuntada qabow
Malaha (2 qaado) ayaa lagu buuxiyey biyo macdan (0.5 l) maalintii. Marka xigta, faleebo ayaa la sifeeyaa oo la barafeeyey qaababka barafka. Kareemooyinkan barafka ayaa laga qaadi karaa maqaarka wejiga. Biyaha macdanta leh, Essentuki ama Narzan, waxaa loo qaataa maqaar madow, iyo noocyo dhexdhexaad ah oo biyo ah ayaa ku habboon maqaarka qalalan.
Waa muhiim! Isticmaalka buug-yarahan waxaa ka mid ah ka saarista dioxide kaarboon macdanta. Si arrintan loo sameeyo, dhalada ayaa la ruxaa, waxa ku jira dusha sare (tusaale ahaan, digsi) oo waxay degeen illaa hal saac ka hor inta aan la saarin xayawaanka.
Recipe for tonic wajiga
Tufaaxa cusub ee 2-3 ubax ee 20 daqiiqo ayaa lagu shubaa koob saddexda koob oo biyo karkar ah, halkaas oo shaaha oo malab iyo dhawr dhibcood oo liin laga sameeyey. Qaybta la dhammeeyey oo leh suufka suufka waxaa lagu daboolayaa wejiga oo maydhay 15 daqiiqo ka dib.
Si eyga u kacaan si ay u sii hayaan hantidooda faa'iido leh, waa lagama maarmaan in la qalajiyo si haboon.
Koofiyadu waxay leeyihiin tiro ah sifooyin daawo ah, tusaale ahaan, waxay leeyihiin hanti waxyaabood ah, waa kaadiyaan iyo wakiil choleretic, waxaana sidoo kale loo tixgeliyaa inuu yahay antioxidant xoog leh. In badan oo dhir daawo ah waxaad ka heli kartaa cuntooyinka bogsashada iyadoo la adeegsanayo xididdada dhaqankan.
Caleemaha la qalajiyey, la dhaqay, iyo xididdada la qalajiyay si fudud ayaa loo dubay foornada, dhulka kudheer, waxaana loo isticmaalaa sida caanaha shaaha marka la samaynayo shaaha. Si loo hagaajiyo dhadhanka iyo bogsashada guryaha, waxaad ku dari kartaa caleemaha qalalan ee warshad isku mid ah.
Laba qaado oo xididdada jajabiyey waxaa la kariyaa 15 daqiiqo 0.5 litir oo biyo ah, ka dibna lagu duuduubay laba saacadood. Qalabka waxaa la qaataa kahor cuntooyinka kala badh, saddex jeer maalintii.
Raadinta xubnaha iyo nafaqooyinka ee duurjoogta ayaa ku jira caleemo, qeybtaani waxay ka duwan tahay midhaha iyo xididdada ay ka kooban tahay iyo waxa ku jira fiitamiin B1, K, P, qaxwaha iyo bakeeriga diilinta. Caleenta warshadu waxay faa'iido u tahay xasilinta xaaladaha hargabka, dhibaatooyinka ka yimaada mareenka caloosha iyo mindhicirrada (ka sii darista boogaha iyo gumaarrada, shubanka), si loo wanaajiyo shaqeynta caloosha. Caleemaha Rosehip, leh sifooyinka bogsashada, muddo dheer loo isticmaalay labadaba madaxbannaan iyo qayb ka mid ah shimbiraha dhirta kala duwan.
Qaado shaah ah oo la qalajiyey ama farabadan caleemo cusub ayaa la dhajiyay 10 daqiiqo galaas oo biyo karkaraya. Markaas faleebo waa la sifeeyay oo sakhraan sonkor ama ku darida malab. Diabeteska, stevia waxaa lagu daraa shaah halkii sonkorta. Tayada wanaagsan waxay leedahay faleebo dhalaal ah, oo lagu kariyey darmuus. Cabitaanku wuxuu si fiican u shaqeeyaa weelasha weelka dhalada ah, halkaa oo ay ka soo baxaan tamarta miraha ee dhexdhexaad ah. Miro qalalan kululeeyo oo ku rid fawaakih - miisaaniyad ah oo beruud ah ayaa lagu shubay galaas biyo karkaraya.
Waa muhiim! Markaad ku dareyso biyo, hubi in ay jirto meel hawo ah.
6-8 saacadood ka dib cabitaanka waa la wada cuni karaa.
Maxaa kale oo aad samayn kartaa faleebo
Rosehip ma aha dhirta kaliya ee dabiiciga ku hareeraysan, kaas oo leh hanti mucjiso ah. Dhaqamada badani waa kuwo aan la barbar dhigi karin midba midka kale, maaddaama faa'idooyinka mid kastoo ay yihiin kuwo gaar ah, inkasta oo ay xitaa ay isku dhafan yihiin.
Warshadani waa qaraabo dhow oo duurjoog ah oo ka soo jeeda qoyskii Rosaceae. Inkasta oo aysan jirin sumcad aad u wanaagsan, sababtoo ah helitaanka alaabtamihiisa khamriga ee silsiladaha farmashiyaha, hawo maaha mid ka sii hooseysa isku dhejinta caansan ee ku yaala bogsashada guryaha labada caws iyo caleemaha labadaba. Waxay awood u leedahay in ay caawiso jidhka bini-aadanka si uu ula dagaallamo cuduro kala duwan oo uu ku dhaco dheecaan, daawada antispasmodic, hypotensive, cardiotonic iyo vasodilating.
Baro sifooyinka faa'iidada leh ee haweenta jirka; sida loo qalajiyo loona badbaadiyo haweenka xilliga jiilaalka.
Cunto: Qaaddo oo ah nooca berry ah ayaa lagu shubay galaas biyo ah karkaraya, kululeeyo barkada biyaha 15 daqiiqo, qaboojiso iyo la sifeeyo. Qalabka kale waxaa lagu cadaadiyaa oo lagu daray faleebo.
Soo dhoweynta: nus nus koob oo nus saac ka hor cunto kasta.
Dhadhaminta berry viburnum waa arrin ka mid ah wadahadalka, laakiin ma aha in ay qaataan guryaha dawooyinka ee fiican. Hadal caan ah ayaa loogu talagalay warshadan: "waa saaxiib Kalina, dhakhtar looma baahna taas". Berry oo dib u soo celiyo xoog, oo wuxuu leeyahay saameyn raadayn leh marka dhiigbaxayo mareenka caloosha iyo mindhicirka, wuxuuna xoojiyaa nidaamka difaaca.
Baro sida loo isticmaalo viburnum, sida loo isticmaalo guryaha dawooyinka loogu talagalay haweenka, iyo sidoo kale la ogaado siyaabo dhowr ah oo loo yaqaan viburnum goosashada xilliga jiilaalka.
Cunto: Qaado oo ah nooca la qalajiyey ee viburnum waa la jajabiyey, ka buuxsamay galaas biyo ah oo karkaraya oo lagu mudo afar saacadood.
Soo dhoweynta: 100 ml cuntada ka hor.
Berry currant ku jira fitamiino badan. Marka la tilmaamayo guryaha dawooyinka waxaan ku hadlaynaa inta badan ee ku saabsan currant madow, laakiin qaraabada ay muuqaalkeeda (casaan, caddaan) sidoo kale maaha mid aad uga fog faa'iidada. Lacagaha ku jira qaabka faleebada ee berry iyo caleemaha waxay yareyn karaan saamaynta cuncunka marka ay timaado dhibaatooyinka caloosha iyo, sidaas darteed, hagaajinta rabitaanka cuntada.
Cunto: 4 qaado oo ah currants qalalan ku shub 0.5 litir oo biyo ah, karkariyo 5 daqiiqo iyo duub saacad.
Soo dhaweynta: nus nus galaas nus saac cuntada ka hor.
Dhammaan noocyada currants waxay leeyihiin waxyaabo faa'iido leh: caddaan, casaan iyo madow.
Marka laga soo tago caawinta dheef-shiid kiimikaad caafimaad leh, sida dhirta kor lagu sharaxay, peppermint waxay yarayn kartaa dhibaatooyinka iyada oo la ciribtiro astaamaha lallabbada, iyo sidoo kale dhagxaan kelyaha. Cab cabir leh, mid fudud oo yareynaya buufiska.
Cunto: 2 qaado oo naadi qalajiyey ku shub hal galaas oo biyo karkaraya, ka tag 30 daqiiqo iyo filter.
Soo dhoweynta: koob saddexaad oo faleebo 20 daqiiqo cuntada ka hor.
Isticmaalka cabitaanka wuxuu leeyahay kala duwanaansho gaar ah carruurta iyo dadka waaweyn. Waxaa cad in dhammaan noocyada khamriga ee wakiilada daaweynta aan la adeegsan karin da 'yar, laakiin ka kooban yahay diyaar garowga ka yimid miskaha Rose waxay leeyihiin xadid da'da qaar.
Qodobka aasaasiga ah ee dadka waaweyn ee isticmaalka faleebada korka loo gooyo ee wax lagu karinayo waa mid dhexdhexaad ah. Sida kor ku xusan, oo leh shucuur faa'iido leh ee qalabkan, waxay leedahay contraindications ma aha oo kaliya cudurada qaarkood, laakiin sidoo kale isticmaalka tiro badan oo cabitaan sida. Tusaale ahaan, haddii cudurku galo, faleebo ayaa kicin kara dhaqdhaqaaqa dhagxaanta ka soo baxa beerka xayawaanka, xitaa ka hor inta aan la bilaabin daaweynta waa inaad la tashataa takhtar kaasoo go'aamiya habka saxda ah iyo qiyaasta miskaha.
Dabcan, marka loo eego carruurta, habab kasta waa in si taxaddar leh loo dabaqo. Cunnada nafaqada leh ee ka qaybqaadashada miskaha gaduudan waa in lagu daraa wax ka hor intaan ilmuhu gaarin da'da 8 bilood. Miisaankoodu waa inuusan ka badnayn 100 ml maalintii, waana inay noqotaa decoction. Faleebo ayaa lagu siin karaa isla qiyaasta da'da aan ka horeyn sanad. Sidoo kale, ha ilaawin saamaynta daaweynta joogtada ah isla markaana ha siin daawada ilmaha fiidkii, si looga fogaado khalkhalka hurdada.
Ma taqaanaa? Intii lagu guda jiray xayiraadihii ugu da'da yaraa ee degaanka Switzerland, casriga waxaa lagu ogaadey in horayba loogu noolaa barafka da '
Muddo intee le'eg ayaa faleebo lagu keydin karaa?
Cabitaanka waxaa lagu keydin karaa qaboojiyaha ama qolka hoose iyo qaboobaha 2-3 maalmood. Badbaadinta, waxaa ugu wanaagsan in la isticmaalo weel dabool leh dabool adag, marka laga reebo hannaanka shisheeye ee alaabta shiidan - malqacadaha, muraayadaha iwm.
Rosehip wuxuu caawin karaa jiritaanka qof weyn iyo caruur leh dhibaatooyin caafimaad oo badan, maxaa yeelay waxay ka kooban tahay walxo badan oo wax ku ool ah. Isticmaalka saxda ah ee sahayda ayaa hoos u dhigaya calaamadaha iyo baabi'inta cudurada qaarkood iyada oo aan la isticmaalin daroogooyinka rasmiga ah iyo kuwa qaaliga ah, iyo haddii cudurku maqan yahay, shaaha laga helo midhaha warshadu waxay noqon doontaa saldhig fiican oo horumarinta difaac adag.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Cunnooyinka daawada dhaqanka 2019